Akụkọ - ofufe
Ofufe, (ịtụ Diptera), nke ọ bụla dị ukwuu ụmụ ahụhụ nke ejiri naanị otu nku nku efe efe na mbelata nku abụọ nke abụọ na-akụ (a na-akpọ halteres) ejiri mee ihe. Usoro ahụ ofufe a na-ejikarị eme ihe maka obere ahụhụ ọ bụla na-efe efe. Otu o sila dị, entomologythe orukọ na-ezo aka kpọmkwem ihe dị ka ụdị 125,000 ụdị dipterans, ma ọ bụ ijiji "ezi", nke a na-ekesa n'akụkụ ụwa niile, gụnyere subarctic na ugwu dị elu.
Ndi dibia bekee bu ndi eji aha ndi ozo dika ndi gants, midges, anwụnta ,, na ndi na eweputa akwukwo, tinyere otutu ijiji, tinyere inya inyinya, ijiji ulo, na ndi nkpuru, anu, ndi ohi, na nke ijiji. A na-akpọ ọtụtụ ụdị ahụhụ ndị ọzọ ijiji (dịka, dragonflies, caddisflies, na mayflies ), Ma akụkụ nku ha na-eje ozi iji mata ọdịiche ha na ezigbo ijiji. Ọtụtụ ụdị dipterans dị ezigbo mkpa na akụ na ụba, ụfọdụ, dị ka nnụnụ nkịtị na anwụnta ụfọdụ, dị mkpa dị ka ndị na-ebu ọrịa. Lee dipteran.
N'oge ọkọchị, e nwere ọtụtụ ijiji na ụmụ ahụhụ ndị ọzọ na-efe efe n'ugbo ahụ. E nwekwara ọtụtụ ụmụ ahụhụ n’ugbo. Ngwunye ahụhụ na-enye nsogbu na ọrụ ugbo. Ahụhụ kachasị na-egbu ụmụ ahụhụ ndị a bụ ijiji. Ijiji abughi nani nsogbu nye ndi oru ugbo, ha na-akpasukwa ndi mmadu iwe. Ijiji nwere ike ibunye udiri oria iri abuo na oria di nkpa nke na emetuta oria na ulo ozuzu okuko, dika avian influenza, oria Newcastle, oria na onu, ezia ahụ ọkụ, avian polychlorobacellosis, avian colibacillosis, coccidiosis, wdg. Mgbe ntiwapụ pụtara, ọ nwere ike mee ka mgbasa nke ọrịa na-agbasa ọsọ, na ijiji buru ibu na anụ ụlọ nwere ike ibute mgbakasị na mmetọ nke egghells. Fiies nwekwara ike gbasaa ọtụtụ ọrịa na-efe efe mmadụ, na-eyi ahụike nke ndị ọrụ egwu.
Ya mere, gịnị ka ndị ọrụ ugbo kwesịrị iji ijiji mee?
1. Njikwa ahụ
Mgbochi aka na njikwa anụ ụlọ na ebe a na-azụ ọkụkọ bụ iji kpochapụ nsị ahụ n'oge, ọkachasị ị paya ntị n'akụkụ akụkụ nwụrụ anwụ nke nsị na nsị. Anụmanụ anụmanụ ga-adị nkụ dịka o kwere mee. Na ahihia na ulo ozuzu okuko ozuzu ahihia, ndi oria na ndi nwere nkwarita na anu ulo kwesiri ka edozi ha n'oge, site na isi iyi iji wepu ma obu ibelata ebe ozuzu nke anwụnta na ijiji.
2. Nchịkwa ndu
Nchịkwa ndu nke anwụnta na ijiji bụ ịzụlite ndị iro sitere na nsị. Ndị iro nke anwụnta na-agụnye dragonflies na agụ agụ. Na ọnọdụ eke, enwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị iro nke anwụnta na ijiji na nsị, na nsị anụ ọhịa na-enyere aka na uto nke ndị iro nke anwụnta na ijiji.Ọ bụ ezie na usoro ndị a nwere ike igbu ijiji na obere oge, ha enweghị ike iwepu ijiji. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iwepụ ijiji, ị ga-atụkwasị anya n’usoro sayensị.A mụrụ ma si na Germany bute ọnyà ndị ọhụrụ. Ọkara elekere elekere mgbe agbanyechara ike ahụ, ijiji niile dị n'ime ụlọ ahụ furu efu, nke a bụ usoro sayensị kachasị iji kpochapụ ijiji, nke kachasị mfe!Onye a na-egbu ijiji bụ akụkọ ifo ahịa, ihe kariri otu narị puku mmadụ na-eji ya. Nke a bụ ngwaahịa magburu onwe ya na-ejide nwa ijiji na-akpaghị aka! Adabara ugbo, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, nri ahịa, nri nhazi osisi na ugbo na ebe ndị ọzọ.Ijiji nwere isi siri ike nke shuga, mmanya, amonia na azu. Mgbe ijiji na-am ụ ara ahụ, a ga-ebuga ya na ọnyà ijiji ya na ntụgharị nke efere rotary.